विश्वलाई चकित पार्दै राष्टपति पुटिनले गरिदिए यस्तो घोषणा, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
विश्वलाई चकित पार्दै राष्टपति पुटिनले गरिदिए यस्तो घोषणा, के हुन्छ अब ?
एजेन्सी। सबैलाई चकित पार्दै रुसले फिनल्यान्ड र स्वीडेनलाई पश्चिमा सैन्य सङ्गठन नेटोमा सामेल नहुन आग्रह गरेको छ। रुसले फिनल्यान्ड र स्वीडेन नेटोमा सामेल भए युरोपमा स्थायित्व नआउने चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ।
रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले नेटो सङ्गठन रुससहित विभिन्न देशमा अस्थिरता निम्त्याउने माध्यमका रुपमा रहेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ।
रुसले गएको फेब्रुअरी २४ देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। युक्रेन नेटोमा सामेल हुन नहुने रुसको मुख्य माग छ। आउँदो जुनको सुरुमा फिनल्यान्ड र स्वीडेनको नेटो सदस्यबारे छलफल हुने सम्भावना छ।
तर रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि फिनल्यान्ड र स्वीडेनमा नेटोमा सामेल हुने पक्षमा जनमत बढ्दो छ। सन् १९४९ मा सोभियत विस्तार खतराको सामना गर्न नेटोको गठन भएको थियो।
यता युद्धका कारण यो वर्ष युक्रेनको अर्थतन्त्र झन्डै ४५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकको प्रक्षेपणले युद्धका कारण युक्रेनको अर्थ व्यवस्था कोरोना महामारी कारण पूर्वी युरोप र मध्य एसियामा परेको असर भन्दा बढी हुने देखाएको छ।
युक्रेनमा शासन चलाइराख्न अनि कठिनाइमा परेका मानिसलाई राहत दिन ठूलो परिमाणमा वित्तीय सहयोग तत्काल खाँचो भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।
युक्रेनका धेरैजसो काम गर्ने समूहका मानिस या त लड्न या त भाग्न बाध्य भएका छन्। व्यापार बन्द छन्। सडक, कारखाना अनि अन्य पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन्। वर्षौँको प्रगति शून्यमा झरेको छ।
युक्रेनले विश्वभरि नै गहुँ र सूर्यमुखीको तेल निर्यात गर्ने गर्थ्यो जुन अहिले ठप्प भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा विश्वभरि नै खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने अनुमान छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई तानाशाह भनेका छन्।राष्ट्रपति बाइडेनले पहिलो पटक पुटिनलाई तानाशाह भनेका हुन्।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बाइडेनको भनाई सत्य भएको बताएका छन्। सत्य नेताको सत्य शब्द’, बाइडेनको भनाइप्रति इंगित गर्दै जेलेन्कीले टिप्पणी गरेका छन्।
यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनले युद्ध अपराधको ‘नक्कली’दाबी गरेपछि शान्ति वार्ता ‘अन्तमा’ पुगेको बताएका थिए। तेस्तै,युक्रेनमा रुसी हमलापछि ४८ लाख बालबालिका विस्थापित भएका छन्।
यो युक्रेनका बालबालिकाको कुल जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाई हो।राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफका आपतकालीन कार्यक्रम निर्देशक म्यानुअल फोनटाइनले यति ठूलो संख्यामा बालबालिका विस्थापित भएको पहिलो पटक देखेको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
शरणार्थी बालबालिकामध्ये २८ लाख देशभित्रै र २० लाख अन्य देशमा विस्थापित भएको उनले बताए। २४ फेब्रुवरीदेखि रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलामा अहिलेसम्म १४२ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको राष्ट्रसंघले पुष्टि गरेको छ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको दुई महिना पुरा हुन लागेको छ। हालसम्म युद्ध रोकिएको छैन।यस क्रममा युक्रेनस्थित मारियुपोल शहरका मेयरले एपीसँगको कुराकानीमा आफ्नो शहरमा मात्र १० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको जानकारी दिएका छन्।
मेयर भेदिम बायसेन्कोले सोमबार एपीसँग भने,‘सडक सर्वसाधारणको लाशले भरिएका छन्। सो क्रममा उनले सो शहरमा अझै १ लाख २० हजार मानिस फसेको पनि जानकारी दिएका छन्।
उनीहरुलाई खानेकुरा, पानी र औषधिको कमी भएको बताइएको छ। उनले रुसी सेनाहरुले ट्रकमा शवहरु भेला पारेर खरानी बनाएको पनि दाबी गरेका छन्।